Dhegeysiga Codadka Archives - Daafeet.com
Home » Dhegeysiga Codadka
Waxgaradka goblka shabeelaha hoose ayaa dhaliiley qaabka ay ciidamada dowlada uga howl galaan gobolka, waxgaradka ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay la wareegeen degaano ka tirsan Shabeellaha Hoose, islamarkaana ay soo dhaweeyeen dadkii kunoolaa degaanadaasi , balse Ciidamada dowladda ay haddana ay ka baxeen deganaadaasi, islamarkaana ay Shabaab ka qabsadeen Mar kale. Suldaan Cali Shariif oo ka mid ah Waxgaradka ...
Dhegeyso: Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo Dowlada Ku Dhaliiley Weerarada ay Ka Fuliso Gobolka Shabelaha Hoose
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo la hadley warbaahinta ayaa sheegey in uu ka walaacsan yahay Howlgalada iyo weerarada ciidamada dowlada somaliya ay ka wadaan Degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa uuna sheegay in wax laga Xumaado ay tahay in Ciidmada Dowlada ay dib uga soo laabtaan deegaanada Iyo dagmooyinka ay kala ...
Dhegeyso Madaxweynaha oo Markii ugu Horeysey Ka Hadley Arinta “Qalbi Dhagax”
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay Kiiska Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ay dowladda Soomaaliya u dhiibtay dowladda Itoobiya. Madaxweynaha oo la weydiiyay Su’aal ku aadan sababta lagu dhiibay Qalbi dhagax ayaa waxaa uu ku gaabsaday go’aankii ay ka gaareen arintaasi Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa uu sheegay in arinta Qalbi dhagax Hay’adda Sharci dejinta ...
Dhegeyso: Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo Fariin u Direy Dadka Wadooyinka Dhisanaya
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa sheegay in tilaabo adag laga qaadi doono dadka doonaya in ay dhacaan hantidda danta guud ee Muqdisho. Waxaa uu sheegay in ay ku raad jooggaan dadka dhisanaya Wadooyinka Wadajir iyo sidoo kale Dharkeenley, islamarkaana ay ka qaadi doonaan tilaabo culus. Gudoomiye Yariisow ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir aysan aqbali doonin in ...
Dhegeyso:Maamulka Gobolka Shabelaha Hoose oo Xaqiijiyey Diyaarad La Sheegey Iney Kusoo Dhacdey Nawaxiga Degmada Wanleweyn
Diyaarad u muuqata Nuuca Xamuulka ayaa lagu soo warramayaa in ay ku soo dhacday deegaan ku dhow degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabeelaha Hoose. Guddoomiye ku xigeenka Maaliyadda maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifitaax Xaaji Cabdulle oo la hadley warbaahinta ayaa xaqiijiyay In diyaaraddaasi oo aan la ogeyn nuuceeda iyo dalka laga leeyahay ay ku dhacday deegaan u dhexeeyo saldhigyo ay ku ...
Dhegeyso:Xildhibaan Shariif Sheekhuna Maye oo Ka Jawaabey Hadalkii Kasoo Yeerey Xildhibaan C/llahi Sheekh Ismaciil
Xildhibaan Shariif Sheekhuna Maye oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabay hadal ka soo yeeray Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ku aadan in Maamulka degmada Baraawe uu ka dhaxeeyo dhammaanumadda Soomaaliyee. Mudane Shariif Sheekhuna Maye ayaa hoosta ka xariiqay in Maamulka degmada Baraawe ay xaq u leeyihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda degmadaasi. Shariif-Sheekhuna-Maye- Halkan ...
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta warqad uu soo saaray si rasmiya ugu joojiyey dhismaha ka socda dhulka danta guud ee Biyaaso Liibaro ee ku yaalla aagga Ceel gaabta ee degmada Xamar jajab. Guddoomiyaha ayaa hay’adaha ay khusayso ku wargeliyey joojinta hawlaha dhismaha ee socda waxana uu tilmaamay in aan loo ...